Fanontaniana&Valiny: Fantaro i Ilham Nurwansah, mpikatroka ho an’ny fiteny Sundanese · Global Voices teny Malagasy
Fanontaniana&Valiny: Fantaro i Ilham Nurwansah, mpikatroka ho an'ny fiteny Sundanese
Voadika ny 23 Jona 2020 3:18 GMT
Ilham Nurwansah, mpikatroka ho an'ny fiteny Sundanese . Sry natolotr'i Ilham Nurwansah.
Isankerinandro, ireo vahiny mpampiantrano ho avy eo dia hamaly fanontaniana maromaro momba ny làlana nodiaviny sy hanome topimaso fohy momba ny fitenin-dry zareo. Ity ny Fanontaniana sy Valiny niarahana tamin'i Ilham Nurwansah (@inurwansah) izay hanome topimaso momba izay horesahany mandritra ny herinandro maha-mpampiantrano azy.
Rising Voices (RV): lazalazao anay ny momba anao azafady..
Ilham Nurwansah (IN): Ilham Nurwansah no anarako. Mpiteny ny fiteny teratany Sundanese ao Indonezia. Hatramin'ny nandalinako ny Sundanese ho fanomanako ny diplaomako BA sy MA, nitombo be ny fahalinako tamin'ilay fiteny, indrindra fa ny fahafahana hizara amin'ny hafa ireo harena ara-teny sy kolontsaina ao anatiny. Manao fikarohana manokana aho momba ny fiteny Sundanese sy ireo sorabe tranainy ary mandray anjara ao anatin'ny vondrompiarahamonin'ny Wikipedia amin'ny fiteny Sundanese. Manoratra ihany koa lahatsoratra maro momba ny fiteny Sundanese ho an'ireo gazety sy gazetiboky ao an-toerana.
IN: Maherin'ny 39 tapitrisa ny olona mampiasa ny Sundanese (bahasa Sunda), indrindra fa any amin'ny faritra andrefana ao amin'ny nosy Java. Io no mahatonga ny Sundanese ho ny fiteny faharoa be mpampiasa indrindra ao Indonezia. Asehon'ireo porofo ara-tantara voarakitra an-tsoratra fa efa tany amin'ny taonjato faha-14 no voarakitra izy io ary mbola mitohy ampiasaina sy mivoatra hatramin'izao. Ankehitriny dia nampidirina ihany koa ho isan'ireo taranja any amin'ny sekoly ao an-toerana, tohanan'ireo famoahana fanontàna boky, sy fitaovana ety anaty aterineto (ohatra ny Wikipedia sy ny vavahadin-baovao Kora Sunda).
IN: Tsy ny endriky ny fiteny Sundanese fotsiny ihany no horesahako, fa koa momba ny kolontsaina sy ny fahalalàna ankapobeny ananan'ireo vahoaka Sundanese. Miainga avy amin'ireo vanimpotoana ara-tantara ary mankaty amin'ny vaninandro maoderina.
IN: Tiako haseho ny endrika mavitrika ananan'ny kolontsaina Sundanese izay mitohy mivoatra manaraka ny fotoana, miaraka amin'izay rehetra fomba fijeriny sy fanantenany. Manandanja io dingana io ho toy ny fampiroboroboana ny fisiana sy ny anjara toeran'ny tenindreny ao anatin'ny fiarahamonina manontolo (manerantany).